Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Fialantsasatra ao Thailand Songkran: tsy misy karantina na hidina
Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • etn • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • fanorenana • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitaterana • Travel • Toerana fitsangatsanganana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza
Ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Thailand Anutin Charnvirakul dia nilaza fa tsy mandeha mody any an-trano ny olona mandritra ny fialantsasatra Songkran hialana voly sy hisotro.
Songkran no fetim-pirenena ho an'ny fetim-pirenena any Thailand izay hitranga amin'ny 13 aprily.
Ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena dia nilaza fa mbola afaka mivezivezy any amin'ny faritany hafa ny olona nefa tsy mila quarantine.
Ireo mpitsangatsangana hita fa voan'ny COVID-19 dia tsy maintsy karohina ho fiarovana ny fahasalaman'ny olom-pirenena sy ny mpitsidika rehetra.
Raha ny filazan'ny minisitra Anutin Charnvirakul, na dia efa nizara ho faritra aza ny faritany, notendren'ny loko araka ny tahan'ny aretina, tsy hisy hidina. Ny olona dia mbola afaka nandeha nandritra ny fialantsasatra Thailand Songkran nankany amin'ny faritany hafa nefa tsy voatery niditra tany amin'ny quarantine rehefa tonga tany amin'ny toerana nalehany.
Ny olona tokana natokan-toerana, moa ve ireo izay voan'ny virus na noheverina fa tandindomin-doza, hoy ny fanazavan'ny minisitra.
Tamin'ny sosokevitra fa ny mpandeha avy any amin'ny faritany voatondro ho faritra mena dia mety hiteraka ahiahy amin'ny fahatongavany any amin'ny faritany hafa, hoy Andriamatoa Anutin fa raha ny marina Songkran fomban-drazana, ny olona mody voalohany indrindra hangataka fitahiana amin'ireo loholona hajaina. Tsy mandeha any fotsiny izy ireo mba hitady fahafinaretana, handehanana misotro ary mitsidika toerana be olona, ​​hoy izy.
Songkran dia fetim-pirenena ho an'ny taom-baovao Thai izay mitranga amin'ny 13 aprily isan-taona, fa ny fe-potoana fialantsasatra dia manomboka amin'ny 12-16 aprily. Tamin'ny taona 2018, nanitatra ny festival tamin'ny firenena nandritra ny 5 andro ny kabinetra Thai mba hananan'ny olom-pirenena vanim-potoana hivezivezy any an-trano mandritra ny fialantsasatra.
Mandritra ny areti-mandringana COVID-19 dia tokony hisoroka fivoriana lehibe ny olona. Nangataka ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka fa tokony hiambina hatrany ny olona ary tsy ho be fitiavana. Hita miharihary fa niparitaka tamin'ireo vondron'olona mitsidika toeram-pialamboly ity virus ity, hoy izy.
Ny lafiny malaza indrindra amin'ny fankalazana Songkran dia ny fanariana rano. Ny fomba amam-panao dia avy amin'ny lafiny fanadiovana lohataona amin'ny fialantsasatra. Anisan'ny fombafomba ny fanadiovana ny sarin'i Buddha. Ny fampiasana ny rano voatso-drano nanadio ireo sary mba handemana ny olon-kafa dia heverina ho fomba iray hanomezana fanajana sy hitondra harena tsara. Tsy mampaninona ihany koa fa ny volana aprily no andro mafana indrindra amin'ny taona ao Thailand, noho izany ny fandosehana dia fialana aina avy amin'ny hafanana sy ny hamandoana.
Amin'izao fotoana izao dia handeha an-dalambe ny Thai ary miady amin'ny rano amin'ny alàlan'ny kaontenera anaty rano na basy anaty rano na mijanona eo amoron-dàlana miaraka amin'ny fantsom-boaloboka ary mandena izay mandalo rehetra. Mety ho tototry ny tsaoka koa ny mpitsidika, fanao namboarina avy tamin'ny tsaoka ampiasain'ny moanina hanamarihana fitahiana.